VMS စနစ်တပ်ဆင်မှုမပြီးသေးသည့် ကမ်းဝေးငါးဖမ်းရေယာဉ်များ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှ စတင်ကာ တစ်ကြိမ် ငါးဖမ်းဆီးခွင့်ပြုမည် - Yangon Media Group
VMS စနစ်တပ်ဆင်မှုမပြီးသေးသည့် ကမ်းဝေးငါးဖမ်းရေယာဉ်များ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှ စတင်ကာ တစ်ကြိမ် ငါးဖမ်းဆီးခွင့်ပြုမည်
by Yangon Media Group
ဘုရားမြေကျွံသည့်နေရာအနီးရှိ ရဲပြားကုန်း မူလတန်းကျောင်းကို ဒေသခံများ၏ဆန္ဒအရ ပြောင်းရွှေ့
မြန်မာ-အိန္ဒိယ ရိဒ်နယ်စပ်တွင် ဝက်အရောင်းအဝယ်ရပ်တန့်နေသည့်အတွက် ကလေးနှင့်ချင်းတောင်ဒေသမှဝက်ကုန်သည်များ ကျပ်သိန်းရာချီဆုံးရှုံးနစ်နာနေဟုဆို
အသေးစား၊ အလတ်စားနှင့် အငယ်စားလုပ်ငန်းတစ်ရာကို ချေးငွေများ ထပ်မံထုတ်ပေးမည်
မွန်ပြည်နယ်အတွင်း ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုကြောင့် မိုးစပါးဧက ၁၂၀ဝ၀ ကျော် ပျက်စီး
ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၂၆ – VMS စနစ်တပ်ဆင်ရန် အချိန်မီပြီးစီးခြင်း မရှိသေးသည့် ကမ်းဝေးငါးဖမ်းရေယာဉ်များကို လာမည့် စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှစတင်ကာ ငါးဖမ်းဆီးခွင့် တစ်ကြိမ်ခွင့်ပြုပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ယခုနှစ်တွင် ပင်လယ်ပြင်ငါးမဖမ်းရရာသီအဖြစ် ဇွန် ၁ ရက်မှ ဩဂုတ် ၃၁ ရက်အထိ သုံးလသတ်မှတ်ထားပြီး ကမ်းဝေးငါးဖမ်းရေ ယာဉ်အားလုံးကိုလည်း ငါးဖမ်းဆီးခွင့် ပိတ်ပင်ထားရှိကြောင်း သိရသည်။
ပင်လယ်ပြင်ငါးမဖမ်းရရာသီကုန်ဆုံးချိန် စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှ စတင်ကာ ပင်လယ်ပြင်ထွက်ခွာငါးဖမ်းဆီးမည့် ကမ်းဝေးရေယာဉ် များတွင် ဂြိုဟ်တုစနစ်ဖြင့် ရေယာဉ်စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်သည့်စနစ် (Vessel Monitoring System -VMS) စက်တပ်ဆင်နိုင်အောင် ဆောင် ရွက်ခဲ့သော်လည်း အချိန်မီပြီးစီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိ ရသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့သောင်းခရိုင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီး ဌာနမှ ခရိုင်ဦးစီးမှူး ဦးသန့်ဇင်က “ငါးဖမ်းရာသီအစ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှာ ကမ်းဝေးငါးဖမ်းရေယာဉ်တွေအားလုံးကို ငါးဖမ်းတစ်ခေါက် ထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မတပ်ရသေးရင် တစ်ခေါက် ထွက်ခွင့်ပေးပြီး ရက် ၆၀ အတွင်း အပြီးတပ်ရမယ်” ဟု ဩဂုတ် ၂၆ ရက်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။
ရေလုပ်သားများ၏ စားဝတ်နေရေးပြေလည်စေရေး၊ ကုန်ဈေး နှုန်းကြီးမြင့်မှုမရှိစေရေး၊ ပြည်ပပို့ကုန်ပမာဏနှင့် တန်ဖိုးလျော့ကျ မှုမရှိစေရေး၊ VMS လုပ်ငန်းစဉ်များ ချောမွေ့စွာပြီးစီးနိုင်ရေးတို့ အတွက် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ငါးဖမ်းရာသီအစ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ကမ်းဝေး ငါးဖမ်းရေယာဉ်များအားလုံးအား ငါးဖမ်းတစ်ခေါက် ထွက် ခွာခြင်းကို စနစ်တကျစစ်ဆေးခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာ ၁ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့အထိ နှစ်လအတွင်း VMS ကိရိယာအား အပြီးတပ်ဆင်စေပြီး သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေးစခန်းများ ၌ VMS စနစ်တပ်ဆင်ပြီးစီးမှုကို စနစ်တကျစစ်ဆေးခံယူရမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ဦးသန့်ဇင်က “VMS စနစ်တပ်ဆင်တာနဲ့တစ်ဆက်တည်း လိပ် လွတ်မြောက်ရေးကိရိယ(TEDs)ကိုလည်း တစ်ခါတည်းတပ်ဆင်ပြီးမှ ပင်လယ်ပြင်ထွက်ငါးဖမ်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မတပ်ခင် လှေထွက်ခွင့် မပေးဘူး။ တပ်ပြီးမှ ထွက်ရမှာဖြစ်တယ်}}ဟု ပြောသည်။
ရေးမြို့ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများ လှူဒါန်းရန် ရန်ပုံငွေပန်းချီပြပွဲကျင်းပမည်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြစ်၊ ဆည်တမံ၊ ကျေးရွာရေကန်နှင့် စပါးစိုက်ခင်းများ၌ ငါးသားပေါက်ကောင်ရေ သိန်း ၆၀ ကျော် ထည့်သွင်းသွားမည်
Yangon Media Group
တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာမည့်လအတွင်း လာရောက်ရန်ရှိနေ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တွေ့ဆုံပြီး တောင်ကိုရီးယားဘဏ်ခွဲများ ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးဆွေးနွေးမည်ဟုဆို
မန္တလေး-လားရှိုး-မူဆယ်လမ်းပိုင်း၌ ဖြစ်ပေါ်နေသော တိုက်ပွဲများကြောင့် မန်းကုန်စည်ဈေးကွက်၌ တရုတ်သို့တင်ပို့သည့် ပဲတီစိမ်းနှင့် နှမ်းမျိုးစုံဈေးကျဆင်းလာ
ထိုင်းနိုင်ငံ ဖီမိုင်းခရိုင်အား ယဉ်ကျေးမှုဇုန်အဖြစ် သတ်မှတ်မည်ကိုဒေသခံ ၃၀ဝ ခန့်က စုပေါင်းက
ကလေး ခရိုင်အတွင်း (SGG) လိုင်စင်ကားများ ဘီးခွန် စတင်ကောက်ခံ
လမင်းသာ(၂)စားသောက်ဆိုင်တွင် ဆရာတော်အရိုက်ခံရသည့် ဖြစ်စဉ်မှ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူနောက်တစ်ဦးမှ?
လျှပ်စစ်မီတာ တင်ဒါရွေးချယ်ရာတွင် အဂတိကင်းရှင်းခြင်း ရှိ၊ မရှိ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် မေးခွ??
ရန်ကုန် – ပြည် – မကွေးလမ်းမကြီး ချဲ့ရန် စီစဉ်နေမှုကြောင့် အောင်လံမြို့တွင်းမှ နှစ်တစ်ရာကျော် ?
မြင့်မြတ်၊ အိချောပိုတို့ ခေါင်းဆောင် ပါဝင်ထားသည့် ‘ကြေးကြီးတယ်’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား မကြာမီ ရုံတ
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများမှ တစ်ဆင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ကာ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကို လျှော့ချသွ?
ဘီးလင်းမြစ်ရေ၏ အရည်အသွေးသည် သောက်သုံးရေအဖြစ် အသုံးပြုရန် အန္တရာယ်ရှိနေသဖြင့် ပြည်သူများ ဂရ
ဘာစီလိုနာ၏ ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲတွင် စံချိန်သစ် မက်ဆီတင်နိုင်ခဲ့၊ အဝါကတ် ပြစ်ဒဏ်များအတွက် မှတ??
The Yangon Times ™ and Flower News ™ are the weekly Journals of Yangon Media Group Limited.
Yangon Media Group Here!
© 2019 Yangon Media Group.